Newsofexile.com: सामाजिक कार्यकर्ता केवी खड्काको हत्या
सामाजिक कार्यकर्ता केवी खड्काको हत्या
भुटानी शरणार्थी बेलडाँगी - २ (विस्तारित) शिविरका पूर्व सचिव तथा सामाजिक कार्यकर्ता केवी खड्काको आज साँझ साढे छ बजे हत्या भएको छ । वेलडाँगी-१ र २ को विचमा रहेको हंसे दुम्से सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय नजिक अज्ञात आक्रमणकारीको छुरी तथा रड प्रहारबाट उनको हत्या भएको हो । उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको बेलडाँगी - १ शिविर सचिव टी.वी. गुरुङले बताउनु भएको छ ।
शरणार्थी शिविरका एक सकृय सामाजिक कार्यकर्ताका रुपमा कृयाशील खड्काको पूरा नाम कर्ण बहादुर खड्का हो । उनी भूटान ललाइ व्लकबाट शरणार्थीको रुपमा नेपाल आई सन् १९९२ देखि वेलडाँगी - २ (विस्तारित) को सेक्टर ए २, छाप्रा नं. ०९ मा बस्दै आएका थिए ।
उनको छातीको दायाँपट्टि छुरा प्रहार गरिएको युवा मैत्री केन्द्रका संयोजक मानधोज गुरुङले बताए । अहिले उनको शव सशस्त्र प्रहरी वलले उठाएको र परिवारजन शोकाकुल अवस्थामा रहेको पनि गुरुङले जानकारी दिएका छन् ।
(थप जानकारीका लागि प्रतिक्षा गर्नु होला)
Posted by अर्जुन प्रधान at 6:28 AM